DF Soomaaliya oo Garoonka Aadan Cadde ku gubtay Qaad si qarsoodi ah loo soo geliyay +(SAWIRRO) – HalQaran.com
DF Soomaaliya oo Garoonka Aadan Cadde ku gubtay Qaad si qarsoodi ah loo soo geliyay +(SAWIRRO)
by HalQaran Staff	 March 24, 2020 24 Views
Muqdisho (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Talaadadii maanta gubtay jaad laga soo dajiyay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, xilli dowladda Federalka ay fasaxday laba cisho oo si KMG ah u soo dagayaan duulimaadyada dalka.
Qaadkaan ayaa la sheegay in lagu soo dhex qariyay duulimaadka, balse waxaa gacanta ku dhigay Ciidamada ammaanka dowladda ee ka shaqeeya Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Wasiirka Gadiidka Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Salaad Oomaar oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ay gubeen Jaad si qaldan loo soo geliyey Dalka.
Mr. Oomaar ayaa xusay in jaadkan la isku dayey in lagu soo dhax qariyo Fasixii duulimaadka labada maalin ahaa ee loo sameeyey muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibnaa qaar kamid ah garoomada Caalamka.
Waxa uu sheegay Ciidamada ammaanka ee gacanta ku dhigay qaadkaan inuu kaga mahadcelinaayo tallaabada ay ku qabteen, maadaama kaliya la fasaxay duulimaadyada dadkii Garoomada caalamka ku xanibnaa, balse jaadka aan la fasixin.
DF Soomaaliya ayaa muddo 15 cisho ah hakisay dhammaan duulimaadyada iyo qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya si looga hortago cudurka Coronavirus.
#Dowladda Soomaaliya oo Garoonka Aadan Cadde ku gubtay Qaad #Jaad qarsoodi loo soo geliyay #la gubay
Previous Post Tiro Soomaali ah oo Sweden ugu dhimatay Cudurka Coronavirus (COVID-19)
Next Post Wasiirka Amniga ee Somaliya ‘Islow’ oo beeniyay in ciidamo dowladeed la dul dhigay hoyga Sheekh Shariif Sh. Axmed